News Collection: प्रचण्डको असाध्यै सोझो पुत्र साथीहरुलाई तथानाम गाली गरी फेरि गायव
प्रचण्डको असाध्यै सोझो पुत्र साथीहरुलाई तथानाम गाली गरी फेरि गायव
काठमाडौ । अर्काकी पत्नी विना मगर च्यापेर बेपत्ता भएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका एकल पुत्र प्रकाश दाहाल हिजो सोमबार १५ मिनेट प्रकट भएर पुनः गायव भएका छन् । भारततिर घुमघाममा मस्त रहेको भनिएका प्रकाशले हिजो सार्वजनिक भएलगत्तै सगरमाथा आरोहणका दौतरी कृष्ण केसी र युवराज दुलाल (शरद)लाई गाली गरे र अन्ततः फेरि गायव भए । तर, उनीसँग गएकी बिना भने सार्वजनिक भएकी छैनन् ।
प्रचण्डले छोरो असाध्यै सोझो भएको बताएको एक सातापछि प्रकाश भौतिकरुपमा हैन, भर्चुअल वर्ल्डमा प्रकट भएका हुन् । एक महिनादेखि निस्कृय फेसबुक एक्टीभेट गरेर प्रकाशले स्टाटसमा पूर्व विद्यार्थी नेता केसी र प्रचण्डका पूर्व अंगरक्षक रहेका पूर्व लडाकुका कमाण्डर शरदलाई गाली गरे।
फेसबुकमा प्रकाशले पोष्ट गरे, 'शरद र कृष्ण केसी आफूलाई सफल भएको ठानेका होलान्, अहिलेसम्म गरेको पापको फल अवश्य पाउनेछौ। सगरमाथा चढाउने बेला मेरो खुट्टा ढोग्न आएर अहिले मलाई बदनाम गराउने? तिमीहरुको बलबुताले भ्याउने जति गरेनि तिमी माओवादीको नाममा कलंक कहिल्यै सगरमाथा चढ्न सक्ने थिएन। अहिले तिमीहरुको फुर्ती?' उनको स्टाटसमा केही पत्रकारले लाईक गरेका छन् भने एकजनाले त चाकडी नै गरेका छन्। नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार क्रन्दन चापागाईले प्रतिक्रिया यस्तो छ, – मान्छेलाई पहिले नै चिनेको भएपो हुन्थ्यो त।'
प्रकाशले आफ्नो र विनाको अवस्थाका बारेमा केही पनि लेखेका छैनन्। एकजना लामा थरका व्यक्तिले 'अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई तपाईंको खाँचो छ' भन्दै चाकडी गरेर लेखेको प्रतिक्रियामा प्रकाशले त्यसवारे सोचेको टिप्पणि गरेका छन्। उनले केसी र दुलालले गल्ती गरे पनि आफूमाथि दोष थोपरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले बिनालाई भगाउने प्रकरणमा आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेका छैनन्, तर त्यसवारे अध्यक्ष प्रचण्डलाई चाहिं स्पष्टीकरण पत्र पठाइसकेको बुझिएको छ।
प्रकाशको स्टाटसबारे शशी पोखरेलले टिप्पणि गरेका छन्, – प्रकाश दाहाल फेसबुकमा फेरि आएछन्। आउनेवित्तिकै कृष्ण केसी र शरदलाई माओवादीका कलंक भनेर गाली गर्न भ्याइसके छन्। अब कुन दिन तिमीहरुलाई जनताले कारबाही गर्छन् भनेर उल्टो कृष्ण र शरदलाई धम्की दिन बेर पो छैन त। गाइजात्रा सकियो हैन र?' यता, उनकी कान्छी बनेर हिंडेकी विनाले फेसबुकको रिलेसनसिप भन्ने स्टाटसमा सिंगल (अविवाहित) उल्लेख गरेकी छिन्।